ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: ဘ၀ လက်တွဲဖော်
ရေးပြီးချိန်: 3/20/2008 01:48:00 AM
ကောင်းတယ် ... -ယ် နဲ့ -ရ် မကွဲတာလည်း ရှိသေးသဗျို့ :)
အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေပါစေ ခင်ဗျ :D
ကိုစိုးထက်... ကျေးဇူးပါဗျို့...း)
လက်တွဲဖေါ်က အရပ်ပုရင်တော့ ဘယ်ကောင်းမလဲ။ ကိုယ်က ခါးကိုင်းပြီး လျှောက်နေရမှာပေါ့။ စာလုံးပေါင်းမှန်တဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ ကတော့ တစ်မျိုးပဲ။ ရီးစားစာထဲမှာ ((ခြစ်တရ်)) လို့ ရေးမှာ စိုးလို့လား။ ဟားဟား နောက်တာနော်။ အစစ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ဟားဟား ။။ ဒါဆို ကျွန်တော် မပါဘူးပေါ့နော်.. လိုချင်ပါဘူး၊ ဒါ သက်သက် .. စာလုံးပေါင်း မတတ်သူကို နှိမ်တာ ပဲ .. ;p
တက်ဂ်ထားတာ ၂ခါရှိပြီဗျ.. ဟီးဟီး။။ ဟီးဟီး ဆို သဘောပေါက်ပါ
ကိုရွက်ဝါ စာလုံးပေါင်းကို အရမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ မြန်မာစာ မရေးတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် စာလုံးပေါင်းမှန်ဖို့ တော်တော်ခက်ခဲလာပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကြိုးစားပြီး မှန်အောင် ရေးပါတယ်။ သူများတွေကိုလည်း အဲလိုပဲ ရေးစေချင်ပါတယ်။ မြန်မာမှန်ရင်တော့ ကိုယ့်စာပေကို တန်ဖိုးထားသင့်တယ် ထင်လို့ပါ... ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူး...း)
မောင်လေးမင်းမင်း... စာလုံးပေါင်း မတတ်သူကို နှိမ်တာ မဟုတ်ပါဘူး... ငါ့မောင်က စာလုံးပေါင်းမှန်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား ရေးနေတာပဲလေ... ပြီးတော့ မြန်မာစာနဲ့ ဝေးကွာနေလို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမ ပြောတာက ပြည်တွင်းမှာ နေပြီး မြန်မာစာလုံးပေါင်းမှ မှန်အောင် မရေးကြတာရယ်၊ စာလုံးပေါင်း မှန်မှန်၊ မှားမှား ဂရုမစိုက်ဘဲ ရေးကြတာတွေရယ်ကို မကြိုက်တာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာရေးရင် စာလုံးပေါင်းမှန်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ကြတာပါပဲ။
တက်ဂ်ထားတာ သူများတွေက ရေးပြီးသလောက်ရှိပြီ... အပျင်းကြီးမနေနဲ့...
ညီမလေးရဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်အကြောင်းလေး စပ်စုသွားတယ်.. အဟဲ.. အမကို ဖိတ်စာပို့မယ်ဆိုရင်လည်း မမေ့နဲ့နော်.. :P
လေပြေတစ်ယောက်ကိုစကားကြုံပါးလိုက်ပါရစေ s0wha1 ရေ.. ဘယ်ပျောက်နေတာလဲ.. နေမကောင်းဘူးလား..လို့ ဘ၀လက်တွဲဖော်အကြောင်းလည်း မဖတ်လိုက်ရဘူး မနုစံက ပြောတယ်လို့ ပြောပေးနော်... :)
မနုစံ...ဖိတ်မယ်၊ စိတ်ချ... :P
မလေပြေက အိမ်ရွှေ့ အိမ်ပြောင်းနဲ့ မအားဘူးလို့ ပြောတယ်... ညီမလည်း သေချာမသိဘူး... နောက်မှ ဖုန်းဆက် မေးကြည့်ဦးမယ်... မနုစံ မှာတာ ပြောလိုက်မယ်...
အချစ်နဲ့တွေ့တော့လည်း ပေတံတွေ ကျိုးခဲ့ရ.. အိမ်ထောင်တစ်ခုအတွက် အချစ်ဆိုတာ ဆားပဲတဲ့.. မရှိလို့လဲမဖြစ်သလို..အများကြီးမလိုဘူးတဲ့.. ဟုတ်ပါသလား..
sawgangster ရေ... ပြောပြီးပါပကော... အချစ်မပါတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ဦးစားပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့... အဲလိုပြောတဲ့အတွက် ဦးနှောက်နဲ့ မရွေးချယ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ... ချစ်ပြီဆိုထဲက ကိုယ်ချစ်နိုင်တဲ့လူကိုပဲ ချစ်လို့ရမှာပေါ့... ကိုယ်ချစ်နိုင်ပြီဆိုထဲက ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ ကိုယ်ကြိုက်နိုင်တဲ့ ပုံစံတွေထဲက ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ သူ့မှာ ရှိနေလို့ပေါ့... ဟုတ်ဘူးလား...
ငယ်ငယ်တုန်းကလူကြီးမိဘများပြောနေ ကြားဖူးနားဝ တခုဖြစ်တဲ့
(ကိုယ်ချစ်ကိုမရှာနဲ့သူချစ်ကို ရှာတဲ့)
သူချစ်ကို ရှာခဲ့ မိလို.့ အချိန်ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျ ကိုယ်ပိုင် အချိန်လေး များလဲ ထိမ်းချုပ်ခံရ မှန်းမသိ ထိမ်းချုပ်ခံရ သောအခါ...........အတွေးများစွာ နဲ့ ခံစား ရပါတယ်. အကောင်းဆုံးကတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုအပြည့်အဝရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တဖက်သတ် အတွေးနဲ့ အလွန်အကျွန် မတွေးမိ မလုပ်ဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့ စေတနာမေတ္တာ ဖြင့် အကြံ ပြုချင်းပါ။။ နားလည်နိုင်ပါစေ.
လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်ဝပြီး အားလုံးအစဉ်ပြေစေရန်ဆုတောင်းပေးပါတယ်.
အမိမြန်မာပြည် ကို ချစ်တတ်လွမ်းတတ်သူများရဲ့
ကိုတင်ရဲ့ ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ။ နားလည်မှုက အရေးကြီးဆုံးဆိုတာကို အပြည့်အ၀ လက်ခံပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေနော်။